CHANEL Executive Tote 2014 Caviar ပခုံးလွယ်အိတ်ရွှေရောင်သားရေ j02 - hannari-shop
CHANEL စစ်မှန်သောအလုပ်အမှုဆောင် Tote 2014 Caviar ပခုံးလွယ်အိတ်အနက်ရောင်သားရေလက်ကိုင်အိတ် j02
ဤလူကြိုက်များသော Chanel ပခုံးလွယ်အိတ်ကိုသင်တို့အားကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည် ယေဘုယျအားအလွန်ကောင်းတဲ့ကြိုတင်ပိုင်အခြေအနေ။ ကျေးဇူးပြုပြီးအဲဒါကိုလက်မလွှတ်ပါနဲ့
ကျွန်ုပ်တို့၏အိတ်များအားလုံးသည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းပြီးစပျစ်သီးပါသောသင်သိသည်။ အချို့အိတ်များသားရေသည်ပင်ပန်းနေပုံရသည်။ ငါတို့ကအိတ်တွေကိုသုံးတယ် သီးသန့်လိမ်းဆေး, ဥရောပ၏ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောသားရေဆပ်ပြာနှင့်သိုးသငယ်ဖြင့်လုပ်သောစင်ကြယ်သောအထည်, အိတ်၏သားရေထဲသို့လုပ် စည်းစိမ်ကြီသော နှင့် ထင်ရှားသော။ ထို့ကြောင့်ဤအိတ်သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်မြင်ကွင်းများကိုသင့်ဘေးတွင် ဆက်လက်၍ တောက်ပနေစေနိုင်သည်။ သတိပြုပါ ဘယ်တော့မှ သားရေနှင့်ဆေးသုတ်ခြင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့၏အရေးပါသောစိတ်ဓာတ်ကိုယူဆောင်လာခြင်းကြောင့်အိတ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပါ။ ပြန်လည်ဆေးပြီးသည်နှင့်အိတ်သည်မုန့်ကိုပြန်လည်တွန်းလှန်ပြီးကွဲထွက်သွားသည်။
ပိုင်ရှင်အချို့အတွက်သင်စိုးရိမ်ပါသလား ထိမိခဲ့တယ် အသုံးအဆောင်အိတ်များ? ဘယ်သူ့ကိုအိတ်တွေယူလာတာလဲ။ ကုန်သည်များ၏စျေးကွက်မှအိတ်များကို ၀ ယ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအချက်အလက်များကိုနားမလည်နိုင်ပါ။ ငါတို့ထံမှ ၀ ယ်ယူခြင်းကြောင့်သင်ဟာစိတ်ရှုပ်စရာမလိုပါ။ ငါတို့ ပိုးသတ်ဆေး နှင့် deodorant သင့်ကိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်သင့်တော်ပြီးဘေးကင်းသောအိုဇုနျးမီးစက်ကိုအချိန်တိုအတွင်းအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အိတ်အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေ မင်းလက်ခံတုန်းက ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ထမ်းများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအိတ်များကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ထောင့်တိုင်းကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ နောက်ဆုံးတော့အိတ်တွေကမင်းကိုစောင့်နေလိမ့်မယ် ကလစ် "စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်" ၎င်းကိုစိုစွတ်သောနေရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်ပြီး Chanel အိတ်ထဲထည့်ထားသောသိုလှောင်ရုံတွင်စီမံသည်။
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုမင်းအကြောင်းနည်းနည်းလောက်ပြောပြပေးပါ ဦး ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်အမျိုးသားပြည်သူ့လုံခြုံရေးကော်မရှင်မှလိုင်စင်ရထားသည့်ဒုတိယအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါသည်။ လိမ်လည်မှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ဂျပန်အစိုးရအနေဖြင့်တပတ်ရစ်ကုန်သည်များအားလုံးလိုင်စင်ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်နေရာတွင်ကုန်သည်၏စျေးကွက်၏အသင်းဝင်ဖြစ်သည် သာအစစ်အမှန်အိတ် ရောင်းလို့ရပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည် 1000 အစစ်အမှန် CHANEL အိတ်များကိုရောင်းချခဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့်သုံးနှစ်အတွင်းကျော်ကြားစျေးကွက်ပေါ်မှာ။ ဖောက်သည်များစွာတို့သည်ငါတို့ထံမှလှပသောအိတ်များလက်ခံရရှိသည်။ သူတို့အိတ်နဲ့ပျော်လား ကျေးဇူးပြု၍ အချို့ကိုကိုးကားပါ တုံ့ပြန်ချက်:
+ "အတိအကျဖော်ပြထားသကဲ့သို့ 100% စစ်မှန်သောနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ပျော်မွေ့!"- ဝယ်သူ: as ******
+ "အခုငါအရမ်းပျော်တယ် ငါဘယ်လောက်ပျော်နေလဲလို့ငါမပြောပါဘူး Excellent ကအခြေအနေ"- ဝယ်သူ: tr ******
+ "ရောင်းအားအကောင်းဆုံး! နှလုံးခုန်ပြန်သူမ၏ထံမှဝယ်ပါလိမ့်မယ်!"- ဝယ်သူ: jo *******
+ "ဂရိတ်အိတ်နှင့်အလွန်အစာရှောင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။"- ဝယ်သူ: sh *******
+ "မင်္ဂလာနှင့်ငါ၏ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အတူကျေနပ်မှု"- ဝယ်သူ: mt *******
+ "ချက်ချင်းဆက်သွယ်ရေး၊ စစ်မှန်သောအိတ်၊ တိကျသောဖော်ပြချက်၊"- ဝယ်သူ: la *******
+ "အမြန်ပေးပို့ခြင်းနှင့်ငါပိုက်ဆံအိတ်ကိုချစ် !!"- ဝယ်သူ: co *******
+ "ငါသူတို့အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းချစ်ကြတယ် !! အံ့သြဖွယ်ရောင်းသူနှင့်တိကျသော pics နှင့်ဖော်ပြချက်!"- ဝယ်သူ: us *******
+ "အိတ်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးသည်အလွန်ကောင်းသည်။"- ဝယ်သူ: le *******
+ "လုံးဝလှပသော !! Exquisite.Fast ပေးပို့"- ဝယ်သူ: ma *******
+ "ငါမှာထားခဲ့သည်အတိအကျ။ လှပသောလက်ကိုင်အိတ်"- ဝယ်သူ: 51 *******
+ "အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ bag.Excellent ချောမွေ့လွယ်ကူသောငွေပေးငွေယူ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။"- ဝယ်သူ: ma *******
ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်တွင် 1300 တုံ့ပြန်ချက်များကျော်လွန်ပြီး ၀ ယ်သူအားလုံးနီးပါးကကျွန်ုပ်တို့အားအကောင်းမြင်သဘောထားရှိစေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တုန့်ပြန်ချက်ကကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်အိတ်များကိုမှန်ကန်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့ကိုကျေနပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်မှာအရေးအကြီးဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များဖြစ်သည် ပျြောရှငျသော.
သင် ၀ ယ်ပြီးနောက်ပစ္စည်းကိုဂရုတစိုက်ထုပ်ပိုးပြီးခြေရာခံခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တစ်ရက်အတွင်းကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည်။ သင်ဒါကိုမစောင့်နိုင်ဘူး နောက်ဆုံးသင်အထုပ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစွာဖွင့်လိုက်ပါ။ ထိုအခါသင်လိုချင်သော CHANEL အိတ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သင်အိတ်ကိုပခုံးသို့မဟုတ်လက်ဖြင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်ပြီးမှန်ထဲရှိထောင့်အမျိုးမျိုးမှသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ မင်းပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အခါငါတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ မ ၀ ယ်ခင်ဒီမှာဒီမှာအမှားအယွင်းတစ်ခုခုကိုဖြေရှင်းကြရအောင်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အငါတို့အတတျနိုငျဆုံးလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ မည်သည့်မေးခွန်းများမေးရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။ သင့်အိတ်ကမင်းကိုစောင့်နေတယ် ငါတို့သည်သင်တို့၏ဝယ်ယူဘို့မျှော်လင့်နေကြသည်။
အခြေအနေ & အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
အပြင်ဘက်:7၏ 10
အရမ်းကောင်းတဲ့အခြေအနေ။ အနားပေါ်မှာအနည်းငယ် scuff အမှတ်အသားများ။
အတွင်းပိုင်း: 8 ၏ 10
အသုံးပြုမှုအနည်းဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်အတူ Excellent ကအခြေအနေ။ အရမ်းသန့်ရှင်းတယ်
Hanldes နှင့် hardware:7၏ 10
ဖုန်အိတ်နှင့်ဖယ်ရှားရေးအိတ်: 8 ၏ 10
အသုံးပြုမှုအနည်းဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်အတူ Excellent ကအခြေအနေ။
မှို - မဟုတ်ပါ
စီးကရက် - မဟုတ်ဘူး
အနံ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတစ် ဦး ချင်းအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သင်အနံ့ခံနိုင်လျှင်ဝယ်ယူမှုကိုရှောင်ပါ။
ခန့်မှန်းခြေ အရွယ်အစား: H6.7 "x W12" x D4.1 "(H17 x W30.5 x D10.5 စင်တီမီတာ)
ခန့်မှန်းခြေ လက်ကိုင် drop: 7.2 "(18.3 စင်တီမီတာ)
အပြင်ဘက်တွင်ပစ္စည်းများ: နူးညံ့သော caviar သားရေ
ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ကွင်းဆက် - ရွှေသေံ
အမှတ်စဉ် - 20457594 (စတစ်ကာနှင့်ကဒ်ရှိတူညီသောနံပါတ်)
ပါ ၀ င်သည့်အချက်များ - စစ်မှန်သောကတ်၊ ဖုန်အိတ်၊ ဖယ်ရှားနိုင်သောအိတ်
မူလက 2014 တွင်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
အဆိုပါပစ္စည်းကိုဂျပန်မှအာမခံနှင့်ခြေရာခံခြင်းဝန်ဆောင်မှုအပြည့်ဖြင့်တင်ပို့မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာပူဖောင်းထုပ်ပိုးပြီးပလတ်စတစ်အိတ်အားဖြင့်ဂရုတစိုက်ထုပ်နှင့်ကတ်ထူပြား box ထဲမှာထားလိမ့်မည်။
PayPal ကိုသာလေလံကုန်ပြီးနောက်4ရက်အတွင်းပြုလုပ်ရမည်။
ဖတ်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင့်အတွက်အထူးလက်ဆောင်တစ်ခုရှိတယ်။ မနက်ဖြန်မှာမင်းဆီကိုစာပို့ရင်ပိုလျှော့ချင်ပါတယ် ဒီအိတ်ကိုရဖို့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးကတော့ဒါကငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်အမျိုးသားပြည်သူ့လုံခြုံရေးကော်မရှင်မှလိုင်စင်ရထားသည့်ဒုတိယအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုအတုကိုတင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသောအရောင်းကိုယ်စားလှယ်၏စျေးကွက်များမှ ၀ ယ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိပါကယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူပါ ။100% Authentic ။
တုန့်ပြန်မှုများမထွက်မှီ၊ အမှုဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းတောင်းခံခြင်းမပြုမီ eBay မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။ သင်၏ပြန်ပို့ခြင်းကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် ၁၄ ရက်အတွင်းလက်ခံလိမ့်မည်။ ပစ္စည်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ tag နှင့်တူသည့်အခြေအနေတွင်ပြန်ပို့ရမည်။ ပြန်ပို့လိုက်သောပစ္စည်းကိုမ ၀ တ်ပါ၊ သို့မဟုတ်အခြားအိတ်တစ်ခုသို့မပြောင်းစေရန်ဤ tag ကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သည်။ သင့်အိတ်ထဲမှကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်အသားကိုသင်ဖယ်ထုတ်ပါကပြန်ပို့ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်သင်၏အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပစ္စည်းကိုပြန်ပို့ပါကပြန်ပို့ခြင်းသည်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ လက်ခံရရှိသည့်ရက်ပေါင်း ၃၀ အပြီးတွင်၊ ၁။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှအတုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြသည့်အခါမှသာပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းကိုလက်ခံပါမည်။ ၀ ယ်သူသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှစာရွက်စာတမ်းများကိုတင်သွင်းရမည်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုပြောပြမယ်။ တတိယပါတီမှမည်သည့်စာရွက်စာတမ်းကိုမှန်ကန်တဲ့စာရွက်စာတမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ 14. ဒီပစ္စည်းကိုဖော်ပြမအဓိကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိပါတယ်။
သွင်းကုန်အခွန်အခများသည်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (သို့) ရေကြောင်းပို့ဆောင်စရိတ်များတွင်မပါပါ။ ဤစွဲချက်များသည် ၀ ယ်သူ၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ လေလံ / ၀ ယ်ယူခြင်းမတိုင်မီမည်သည့်ထပ်ဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်နိုင်ငံ၏အကောက်ခွန်ရုံးကိုမေးမြန်းပါ။ အကောက်ခွန်ပုံစံများကိုကျွန်ုပ်တို့မမှန်မကန်ပြုလုပ်ပါ။